८ वर्षीया बालिकालाई ज ब र्ज स्ती करणी गरेको आरोपमा ७२ वर्षीय वृद्ध पक्राउ! - संगालो न्यूज
८ वर्षीया बालिकालाई ज ब र्ज स्ती करणी गरेको आरोपमा ७२ वर्षीय वृद्ध पक्राउ!
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०७:२१Last Updated: ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०७:२१
काठमाडौं, मंसिर ४ : ८ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा ७२ वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मंगलबार रामेछाप नगरपालिका ८ भोटेटार बस्ने ७२ वर्षीय मंगल तामाङले सोही ठाउॅकी ८ वर्षीया बालिकालाई चाउचाउ किन्न गएको बेला फकाएर आफ्नै घरमा लगी जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरी निरीक्षक श्रीशंकर श्रेष्ठका अनुसार तामाङलाई बुधबार जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत रामेछापबाट ५ दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको छ ।
रामेछापकै भुजीमा ५ वर्षिया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मंगलबार मात्रै १८ वर्षीय किशोर प्रहरी हिरासतमा पुगेका थिए ।
यस्तै, १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा नेपाली सेनाका एक हवल्दार पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुर घर भइ ललितपुरको लेलेस्थित सैनिक ब्यारेकमा कार्यरत हवल्दार ३६ वर्षीय गोविन्द सिंह विष्टलाई प्रहरीले बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीको अपराध महाशाखाले उनलाई बुधबार साँझ काठमाडौंको कोटेश्वर चोकबाट पक्राउ गरेको हो। रामेछाप स्थायी ठेगाना भएकी ती बालिकालाई विष्टले गत कात्तिक ३० गते लगनखेलबाट ल्याएर कोटेश्वरको एक होटलमा बलात्कार गरेको उजुरी परेको छ।
पक्राउ परेका विष्टलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको अपराध महाशाखाले जनाएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
आरोपमा पक्राउ परेका ८ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक !
ढल्कुमा घर भत्किँदा चार वर्षीय बालकको मृ त्यु!
कैलालीका भुपेन्द्र बडुवालको ह’त्या आरोपमा फरार युवा…
मुगु बस दुर्घटना: झण्डै तीन सय मिटर तल खसेर पनि…
एक दिनका लागि २२ वर्षीया राज्यलक्ष्मी गाउँपालिका…